Wasiirka gaashaandhiga Soomaaliya oo u ambabaxay dalka Sacuudi Carabiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdishi – Mareeg.com: Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa maanta u ambabaxay dalka Sacuudiga kadib markii uu cusmaad ka helay dowladda dalkaas.
Wasiirka difaaca Soomaaliya oo ka warbixiyay safarka shaqo ee uu ku tagayo dalka Sacuudiga ayaa sheegay inuu casuumaad rasmi ah uu ka helay dhigiisa dalkaasi islamarkaana uu kala hadli doono xaaladaha amni, dhaqaalo, waxbarasho, caafimaad, iyo mid siyaasadeed ee dalka Soomaaliya.
Wasiirka difaaca Soomaaliya, Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa dhanka kale tilmaamay inuu dadaal ku bixinayo in wax laga qabto xaalada cakiran oo ay ku sugan yihiin Soomaalida ku xir xiran xabsiyada dalka Sacuudiga.
Wasiirku si cad uma sheegin ujeedada uu u booqanayo dalka Sacuudiga oo ka mid ah dalalka taageera dowladda Soomaaliya, islamarkaana ay ku noolyihiin kumanaan Soomaali ah oo qaarkood ay heystaan dhibaatooyin nololeed.